TETIKASA TANA-MASOANDRO : Afaka 15 andro no handoavana ny vola tambin’ireo tany voakasika
Araka ny fanazavana efa noentin’ny Filoham-pirenena dia tsy hisy hiala maina akory ireo olona manana tany na trano voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. 9 janvier 2020
Tsy maintsy misy, hoy ny Filoha, ny takalon’ny fananan’izy ireo izay honeran’ny fanjakana araka izay vidiny ambaran’ilay tompony. Noho io antony io ihany koa no nanokafana an’ilay birao fakan-kevitra tetsy Andohatapenaka mba hanoloran’izy ireo ny hetahetany.
Ny Apipa na ny sampan-draharaha misahana ny fisorohana ny tondra-drano amin’ny lemak’Antananarivo no miandraikitra ny fanampiana ny olona amin’ny fanonerana ny tany voakasiky ny Tanamasoandro. Mizotra am-pilaminana hatrany ny fifampiresahana tamin’ireo mponina. Manodidina ny 146 ireo efa nanaiky ny hanome ny taniny ho an’ny fanjakana. Afaka tapa-bolana, raha ela indrindra no handray ny vola tambin’ny tany na trano izay tsy maintsy harodana na hototofana amin’ny fanatanterahana an’ity tetikasa lehiben’ny Filoham-pirenena ity izy.
“Ato ho ato izao izahay dia hiatrika ny fandoavana ny volan’ireo olona izay voakasiky ny tetikasa Tana-masoandro ny taniny, farafahaelany dia ato anatin’ny 15 andro. Misy ireo olona izay manaiky nanao taratasy fanekena tamin’ny fanjakana fa vonona anolotra ny taniny dia miandry fotsiny izy ireo. Tsy nisy akory ny fifampiresahana fa natao fotsiny ny antso dia ireo olona voakasika no manatona” , hoy ny fanazavana noentin’ny tale jeneralin’ny Apipa, Rateloson Philippe.
Araka ny fanazavana nomeny hatrany dia efa tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro ny fananganana ilay “guichet unique” nakana ny hevitr’ireo mponina tetsy Andohatapenaka io. Miroso hatrany ny fanazavana sy ny fandresen-dahatra an’ireo mponina mbola miahiahy hataon’ireo tompon’andraikitra. Ny tetikasa Tana-masoandro izay naroson’ny Filoha Andry Rajoelina ho vahaolana manoloana ny fahatereran’ny tanànan’Antananarivo.